Rayson | peps spring umatilasi intengo
Ihlala ilwela ukwenza kahle, uRayson usethuthuke waba yibhizinisi eliqhutshwa yimakethe neligxile kumakhasimende. Sigxile ekuqiniseni amakhono ocwaningo lwesayensi kanye nokuqedela amabhizinisi esevisi. Simise umnyango wesevisi yamakhasimende ukuze unikeze kangcono amakhasimende amasevisi asheshayo okuhlanganisa nesaziso sokulandelela i-oda. Intengo kamatilasi we-peps Namuhla, uRayson uklelisa phezulu njengomhlinzeki oqeqeshiwe nonamava embonini. Singaklama, sithuthukise, senze, futhi sidayise uchungechunge oluhlukene lwemikhiqizo ngokwethu sihlanganisa imizamo nokuhlakanipha kwabo bonke abasebenzi bethu. Futhi, sinesibopho sokuhlinzeka ngezinsizakalo ezahlukahlukene zamakhasimende ezihlanganisa ukwesekwa kobuchwepheshe kanye nezinsizakalo ezisheshayo ze-Q&A. Ungathola okwengeziwe mayelana nentengo yethu entsha yomatilasi we-peps spring kanye nenkampani yethu ngokusithinta ngokuqondile.Izimiso zokuklama ze-Rayson ziyavumelana nezimo. Zichaza ukuthi zihlelwa kanjani izinto ezihlanganisa imigqa, umumo, imibala, nokuthungwa ngendlela efanele futhi zikwenze ziqondane ngokuhambisana.